Ever November: အီဂျစ်သမ္မတအကြံပေး သုံးဦး ရာထူးကနုတ်ထွက်
အီဂျစ်သမ္မတအကြံပေး သုံးဦး ရာထူးကနုတ်ထွက်
Ever November | 12/06/2012 05:35:00 PM | နိုင်ငံတကာသတင်း
အီဂျစ်သမ္မတနန်းတော်ရှေ့မှာ သမ္မတကို ထောက်ခံသူတွေနဲ့ ကန့်ကွက်သူတွေကြား အပြန်အလှန် ခဲတွေ၊
မကြာသေးခင်က သမ္မတက သူ့ရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကို တိုးမြှင့်ယူလိုက်တဲ့အပေါ်မှာ မကျေနပ်လို့ ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြနေကြတဲ့ သူတွေကို မစ္စတာ မော်စီရဲ့ အစ္စလာမ်ဝါဒီ ထောက်ခံသူတွေက တိုက်ခိုက်မှုတွေ လုပ်ခဲ့ပြီး တဲ့နောက် အခုလို အကြမ်းဖက်မှုတွေ ထပ်မံဖြစ်ပွားနေတာ ဖြစ်တယ်လို့ အဲဒီနေရာမှာ ရောက်နေတယ်လို့ ဗွီအိုအေ သတင်းထောက်က ပြောပါတယ်။
တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်း ပေါက်ကွဲပစ္စည်းတွေ သုံးခဲ့ကြသလို အပျက်အစီး အသေအပျောက် နဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ သေသေချာချာ မသိရသေဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
သမ္မတကို ထောက်ခံသူတွေထဲမှာ အစ္စလာမ်ဝါဒီ မွတ်ဆလင် ညီအစ်ကိုတော်အဖွဲ့က လူများစုဖြစ်ပြီး ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြသူတွေထဲမှာတော့ လူငယ်တွေနဲ့ အမျိုးသမီးတွေ အများအပြား ပါဝင်တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
Posted by Ever November at 12/06/2012 05:35:00 PM
"လေးလတစ်ကြိမ် သွေးလှူဒါန်းသွားမယ့် မင်းမော်ကွန်း"
ဆီးဂိမ်းအကြိုကာလ၌ ပုဂံညောင်ဦးဟိုတယ်များ အခန်းပြည...
ဆယ်နာရီကြာ ဂိုးပေါက်ပျောက်နေမှုကို တောရက်စ် အဆုံးသတ...
"World AIDS Day မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ သ၀ဏ်လွှာကို...
ရှုံးထွက် အဆင့်တွင် ရီးရဲနှင့် တွေ့ဆုံလိုဟု ဘိုနုချ...
ပွဲတော်အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အဆင် မြစ်ကြီးနား၌ လ...
ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းပြောတဲ့ ဝိညာဉ် ဇာတ်ကားအကြောင်း
ဖိလစ်ပိုင် Bopha မုန်တိုင်း လူ ၂၀၀ ကျော်သေဆုံး
မီးလောင်ဗုံးသင့် သံဃာများကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ လူမှုရေးဝ...
ကမ္ဘာ့အကောင်ဆုံး ဆုရှင်ကို ကြိုတင် ရွေးချယ်ပြီးသားဟ...
နမ်းရမည့် ဇာတ်ဝင်ခန်း ရိုက်ကူးရန် သက်မွန်မြင့် ငြင...
အငြင်းပွားနယ်မြေ ဗီယက်နမ်ကင်းလှည့် သင်္ဘောတွေ တိုးချ...
၅.၁၂ .၂၀၁၂ မှ ၁၁. ၁၂. ၂၀၁၂ နေ့အထိ (၇ ) ရက်သားသမီးမ...
ကာတွန်းကားကဲ့သို့ တလွဲများသာ ပြုလုပ်နေဟု မိမိ၏ ခံစ...
ကန်အထူးကိုယ်စားလှယ် မြန်မာ့အရေးဆွေးနွေးဖို့ ၁၅ ရက်...
ဇန်န၀ါရီ အပြောင်းအရွေ့ ကာလတွင် ဇင်းနစ်မှ ထွက်ခွာဖြ...
ရခိုင်ပြည်နယ် ဒုက္ခသည်ကူညီရေး အစိုးရအကူအညီလိုကြောင်...
သပိတ်စခန်းဖြိုခွဲမှုကို စုံစမ်းဖေါ်ထုတ်မယ် လို့ ဒေါ်ေ...
ရခိုင်ပြည်နယ် လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေ ဗြိတိသျှပါလီမန်...